ANTSIRANANA : Nahitana fiakarana ny vidin’ny siramamy amin’ny mpamongady
Fanararaotana no azo andikana ny zava-misy aty Antsiranana amin’ny fahitana ny fiakaran’ny vidin’ny siramamy eo anivon’ny mpivarotra mpamongady aty an-toerana. 6 avril 2021
Araka izany dia raha mampiakatra ny azy ny mpamongady dia miakatra ihany koa ny vidin-javatra amin’ireny mpivarotra antsinjarany ireny.
Samy manao ny vidiny izay tiany ireo mpamongady mivarotra siramamy aty Antsiranana tato ho ato izay. Ahitana izay nampikatra ho 140 000Ariary ny siramamy iray gony aty an-toerana ankehitriny. Ahitana ihany koa izay tsy mivarotra siramamy izany raha tsy miaraka amin’ny entana hafa, izay 5000 Ariary ihany ny fampitaham-bidiny. Fantatra ihany koa fa ahitana mpamongady mivarotra mihoatra n’io vidiny voalaza ambony ireo, satria efa tafakatra 4000Ariary ny kilaon’ny siramamy amin’ny mpaninjara sasany.
Na izany dia azo ambara fa sasatra, ifampitadiavana ny siramamy aty Antsiranana. Tamin’ny fanadihadiana natao no nahafantarana fa misy fahatapahana ny tahiry eo anivon’ny ozinina mpanamboatra siramamy.
Mampametram-panontaniana ny mpanjifa ny fanararaotana ataon’ireo mpamongady manoloana ny zava-misy. Mahatsiaro sahirana ny vahoakan’ Antsiranana manoloana izao fiakaram-bidy amin’ny siramamy izao.
Tsy vitsy ireo mpivarotra mampiasa siramamy toy ny mofomamy, sirop dia nampiaka-bidy ihany koa. Fantatra fa saika manerana ny faritra Diana no ahitana fiakaram-bidin-tsiramamy izao. Nahazoanay vaovao avy any Nosy Be fa tafakatra 180 000 Ariary ny siramamy iray gony any an-toerana.
Manaitry ny tompon’andraikitra voakasika mba hanara-maso ireo tahirin-tsiramamy eo anivon’ny mpamongady ireny fa mahita ny mpanara-baovao fa fihetsika feno fanararaotana no zava-misy.